बाल बिवाह एवं दाइजो प्रथा अन्तको मिशनमा डा. कमोद निराला
गोठालो खबर २०७८ वैशाख १३, साेमबार,१०:१२:AM
वीरगंज, १३ वैशाख। नेपालका केहि ठाउँहरुमा अझै पनि बाल बिवाह र दाइजो प्रथाले गाँजेको छ। समाजका यस्ता विकृतिहरु कानुनत: कुरीति र कुसंसस्करको रुपमा हेरिएको भएता पनि नेपाली समाजबाट उन्मुलन हुनभने सकेको छैन।
यस्तै संस्कारहरु वीरगंजको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका महुवनमा रहेको दलित समुदायमा पनि व्याप्त छन्। उक्त समुदाय अझै पनि शिक्षासंगै चेतनामा पनि तुलनात्मक पछाडी रहेको पाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि उस्तै विकराल अवस्था पाउन सकिन्छ त्यो समुदायमा। राज्यले दलित समुदायको लागि भनेर विभिन्न सुबिधाहरु र आरक्षणको कोटा नै छुट्टाएको भनिएको भएता पनि यो समुदायले यसको भरपुर उपयोग गर्ने अवसर जुटेको छैन। यस समुदायलाई उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्नको लागि कुनै किसिमका कुनै निकायबाट सहयोग प्राप्त गरेका छैनन् । यस समुदायलाई लक्षित गरेर पर्साका प्राय: कुनै पनि नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट प्रयाप्त: बजेट छुटाएका पाइएको छैन। छुट्टाएको नाममात्रको बजेटमा लक्षित समुदायलाई लाभ पुर्याउनको सट्टा आफ्नो नातावाद गरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
वीरगंजको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका महुवनमा रहेको दलित समुदायमा यस्ता खालका समस्याहरु थाहा पाए पश्चात् बहुदर्माइ नगरपालिका का स्थानीय युवा डा. कमोद निरालाले उक्त ठाउँको लागि न्याय, सामाजिक अभियान, बाल बिवाह एवं दाइजो प्रथालाई अन्त्य गर्नको लागि र दलित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन लागि परेका छन्। उनले सो समुदायको लागि गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षामा निरन्तरता र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर जोड दिएर स्थानियाहरुलाई जनचेतनाको कार्य पनि गर्दै आएका छन्। डा. निरालाले यो समुदायका बालबालिकाहरुलाई निःशुल्क ट्युसन पढाउने बारे समेत समूह बनाएर स्थानीय युवाहरुसंग छलफल गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर-२मा दलितहरुको हक अधिकार र उनीहरुको उत्थानको लागि दलित आयोग गठन गरेको भएपनि लक्षित समुदायलाई देखिने गरी जीवनस्तर उक्सिने गरी कुनै परिणाम निस्किएको देखिएको छैन। जिम्वेवार निकायबाट परिणाम देखिने गरि कुनै गतिविधि नभएको हुँदा यो ठाउँका दलित समुदायमात्र नभएर समस्त प्रदेश दुईका जनताहरुले दु:ख व्यक्त गरेका छन् । कोरोनाको महामारीमा प्रदेश सरकारबाट कुनै किसिमका सहयोग नपाएको निरालाले बताए ।
उनि भन्छन्, "यो समुदायहरुको लागि नारा जति मिठो छ, त्यति नै यो समुदायलाई अनुभूत हुने गरि विकास, दैनिक जीवन, शिक्षा , स्वास्थ्यमा जोड दिएको पाएनौं । मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट सकेको सहयोग गर्ने छु। आगामी दिनमा समस्त दलित समुदायमा मेरो विवेक र क्षमताले भ्याए सम्म सहयोग र साथ दिनेछु ।"